Simbagwayir - Storybooks Minnesota
Change language English Spanish Amharic Arabic French German Mandarin Norwegian Oromo Somali
Simbagwayir Simbegwire Simbegwire
Yeroo harmeen Simbagwayir dutu bayee gadiite turte. Abbaan Simbagawayir akka intalli isaa jajjabatu bayee dhamee. Suuta suutaan harmee Simbagwayir malee jiruu gammachuu jiraachuu calaqaban. Ganama ganama wa’ee taa’a nii wa’ee olmaa isanii haasa’u. Galgal immo irbaata wajjiin qophessu. Irabaata bodaa abban Simbagwayir muccan isaa ni qo’achiisa.
Gaftokko abban Simbagwayir garaa mana ture galee. Italoo koo essaa jirta jedhee gafate? Simbagwayir gara abbaa eshe figiddee. Yeroo abbaan isshee harka dubartii qabatee dhabatu in ilaaltee. “Muccaa koo nama addaa han ta’ee tokko wajjiin akka walqunantuun barbaada. Ishee kun Anitaa jedhamit jehde,” seeqataa.
Akkam Simbagwayir, Abban kee wa’ee kee bayee nathimaa ture. Simbagwayir garuu hinseqqannnes; harka ishees hinfunee. Abbaan Simbagwayir gammadde, dhinqiii itti ta’e. Sadeen isaani akka jiruu gammachuu wajjiin jiraacha akka turan hasa’ee. “Mucaa koo Aniitaa akka harmee ketiti akka fudhattu abdiin qaba.”
Jiruun Simbagwayir ni jijjirramee. Yeroo abba ishee wajjiin haasoftu hinqabdu. Aniitaan hojii bayee wan isheef lateef, Simbagwayir yeroo barnoota ishef qophoftu dhabade. Yeroo dhuman galtee rafti. Maddi gammachuu ishee kan ta’ee wayya halkanii harmee ishee laatefi dha. Abban ishee garuu, mucaan sa akka gadda jiraatu hinbarre.
Ji’oota murasaa booda Abban Simbagwayir gara imaala akkan jedhee deme, “Dhimma hijiitif yeroo gababduf bakka bira demuun qaba.” “Hata’u maale akka isin walgargartan nan amana.” Simbagwayir fulaa ishee gurtee garu kana abban ishee hinbarre. Aniitaan wan tokkole hindubbane. Aniitaanis dhimma kanairrati gamchuu hinqabadu turte.
Jiruun Simbagwayir bayee gadhee ta’aa damee. Hojii mana kessa hinfuxxu taanan, Aniitaan itti dhekamiti. Iribaata gubba irrate, Aniitaan bayee nyaate, isheedhat immo xinno dhiftee. Halkan hundaa Simbagwayir uffataa halkanii harmee ishee hammate bossi.
Ganama tokko Simbagwayir hirribarra dafte hinka’iin turte. Aniitaanis, “Mucaayo dhiibooftuu” jettee itti iyyite. Aniitaanis Simbagwayir siree irra harkiftee kaste. Wayyan halkanii bayee midhaagan sun nibixamee bakka lamati citee.
Simbagwayirn bayee aarte. Mana sana gadidhiiftee demuuf murteesite. Ufata halkani harmee isheetif nyaataa qabattee mana batee. Kara abban ishe demee dukka dhaqxee.
Yeroo ittihalkana’u mukka dheeraa gubba korte damee isaatrati siree tolfate. Yeroo gara chiisichaa deemtu akaan jete wadeste, “Ayyo, ayyo, ayyo na dhiftee dametee. Na dhiftee demetee, achuuman hafte. Abban koo nanajallatu kana booda. Harmee, yoom dhufta? Na dhifitee demetee?”
Gyyyaa itti aanu Simbagwayirn sirbaa sana irra debitee sirbtee. Dubartoonni laga sana bishaan waraaban sagalee ishee dhagahan. Sagaleen sunis sagalee mukaa itti fakkate chal jedhan. Ha ta’u malee dubartiin tokko sirrite dhaggeffatee turte.
Dubartitin ol jete mukka ilaalte. Yeroo muccayofi uffata halkanii bareeda agartu akan jete, “Simbagwayi, muccaa obbolessa kooti.” Dubartiin biraa immo uffata miccuu dhifitee Simbagwayi akka mukka irraa buutuu gargarte. Addaadan ishee muka irra bufitee, jajabesite.
Addaadan Simbagwayi mana isheeti fudhatee. Simbagwayifis nyaata o’aa keennitefi ciree gubba ishee rafiste. Halkan san Simbagwayi boyichaan gara chisichaa dhaqxee. Ha ta’u male boyyicha kessi gammachudah. Addaada ishee akkan ishee kunistu nibekiti turte.
Abban Simbagwayi yeroo imala deebi’u, siree isheera dhabee, akan jedhe, “Maltuu dhalate?” jedhe rifachuudahn gaafate. Durbatitiinis Simbagwayi akka deemte itti himte. “Akka nakabajduu itti himeen ture. Anis immo bayeen seera itti jabesse.” Abban Simbagwayi gara lagaa demee. Gara mana obboletii isaa demee Simbagwayi barbacha dhama’ee.
Abban Simbagwayi yeroo dhufu isheen durbii ishee wajjiin taphacha turte. Abban ishee it dhihaatee akan, Simbagwayi, Harmee dansaa argatee. Ishee sijaaatu fi si hubbattu. “Bayeen siti bonaa. Bayeen sijaaladha.” Simbagwayi akka addaada ishee bira hamma bardaddu akka techu waligalan.
Abban ishee guyyaa guyyaa dha isshee ilaala ture. Boddeeti Aniitaa wajjiin dhufan. Sana booda harka Simbagwayi ti galtee dhifama ishee gafaatee. Bayeen dogongoree dhifamaa nagodhi mucaa ko. Caarraa biraa nakenitaa? Simbagwayi oljette fulaa abbaa ishee isa gadde ilaalte. Achumaan gara Aniitaa ademitee ishee hammate.
Torbaan itti anuu Aniitaan Simbagwayi, durbi fi addaada ishee laaqan afferte. Qophii gaari ture! Aniitaan nyataa Simbagwayi jallatu qophesite. Namni hundiinu hamma quuftu nyaate. Sana boodas ijollen yeroo taphatu warri gurdudon immo hasa’a turan. Simbagwayi bayee gammadee. Hatatamaan gara mana abba isheeti debitee akka jaalalan harmee budeena wajjiin jiratu yerooma san murtesite.
Translated by: Demoze Degefa